Ungandibatsira here kuti ndiwane high PR backlinks inotengeswa?
Ndinoziva kuti hazvisi nyore zvachose kuti uwane nzvimbo yakachengeteka uye yakachengeteka inopa PR yakakura shure kumashure. Uye zvechokwadi, zvinenge zvisingabviri kuvakira backlinks yakakwana neHigh Domain Authority, PageRank, uye Page Authority - nenzira yakasikwa, pasina chero mari yakabhadharwa. Zvakanaka, uchishandisa zvinyorwa zvepamutemo kuti uwane hutano hwakanaka hunotarisana nemapeji ewebhu web site yako kana blog. Uye ini ndine boka remawere kuti iwe uwane PR PR backlink inotengeswa - tarisiro ine ngozi shoma inogona kuitika iwe pachako uine chikwata chepamusoro neGoogle.
Nzvimbo Dzakanaka NaPur PR Zvinyorwa Zvokutengesa
Hapana chikonzero chekupedza nguva yako ichikupa chiyeuchidzo chinokuvadza - chero chiitiko chinosangirwa kubhadhara zvikwata zve SEO nguva dzose Ive chaicho chine ngozi risky. Ndicho chikonzero pasi apa ndichaenda kuzokuratidza dzimwe nzvimbo-dzinopupurirwa uye dzimwe nzvimbo shoma dzakachengeteka pane. Kana iwe uine ushingi zvakakwana (kana usina hanya - ndiani anoziva?), Pano ndipo paunogona kupa mutsva ku SEO yako - kunyanya usina kusimudza mutsvuku mutsvuku neGoogle pakarepo.
Links Management - iyi nyanzvi inogona kukurudzirwa senzira yakanakisisa yekuedza yako yekutanga nekuwana kubhadhara backlinks yehutsika hunoita sehupenyu kuti uwedzere SEO yako pachiyero. Iwe unogona kuwana ipapo kuwanika kwakakwana kwehukama hwakasiyana neDA, PA, uye PageRank scores. Cherechedza, zvawakapiwa kuti bhajeti yako yakaoma, sarudzo iyi ndiyo ichava sarudzo yako yakanakisisa - kupa zvichida mabhii ematengo asina kutengesa pakati penzvimbo dzose dzinoshandiswa-nzvimbo dzakataridzika dzinosangana neP PR zvakakonzerwa nekutengesa.
Black Hat Links - ndiyo nzvimbo yechipiri yakanakisisa kutenga kana kushandiswa kwemashure kumashure kana kunyange yakakura yakauya yakawanda uye ine mutengo. Asi ini ndinokurudzira tichifunga nezvechikonzero ichi chekubhadharwa chikwata chekuvakira chete kana iwe wakagadzirira kutenga kamwechete zvinyorwa 50-60. Uye iyo inonyanya kukoshesa nzvimbo ino ndeyokuti inenge yese ye backlink yaunogona kutenga ikoko inouya nehuwandu hweDoFollow huripo.
Fiverr - pasinei nenzvimbo ino inozivikanwa pakati pekutengeswa kwema digital uye masangano ekutengeserana ari pamwe chete inogona kuve yakasarudzwa zvakanaka kune avo vanotarisira PR yakakura shure kumashure. Cherechedza, zvisinei, kuti Fiverr ichakuunzira kufambira mberi kunogona kuitika muSEO chete kana uchishandiswa zvakanaka. Ndinoreva kuti pane zvakawanda zvakasiyana-siyana zvishandiso zvinowanikwa ipapo, saka haufaniri kumbomhanyira kuwana hukama hwakawanda sezvinogona. Yeuka kuti kuwana zvakanyanya kutsvaga mukuvakwa kwekubatanidza nguva dzose kuchaonekwa sekufungira mumaziso eGoogle.
Backlinks Hub - ndiyo nzira yekupedzisira yandinokurudzira kukurudzira kuedza kutenga zvakanakira backlinks zve SEO. Pakati pemakona ayo akasimba ndiro chivimbiso chegore negore chinouya ne backlink imwe yakatengwa paRedlinks Hub. Uye izvi zvinoratidzika sezviri kutengesa zvakawanda pamusoro pehutano panzvimbo yekutengesa. Zvisinei, mutengo unowanzoonekwa kunze uko ungaratidzika kunge wakakura Source .